Mayelana NATHI - Nanchang Vision Garment Co., Ltd.
I-Nanchang Vision Garment Co, Ltd. itholakala edolobheni laseNanchang, esifundazweni saseJiangxi, eChina. INanchang idume ngezindwangu zesimanje zokwaluka ekhaya nakwamanye amazwe, ngokunikezwa ngokulandelana 'i-Chinese Famous Knitwear City', 'National Textile Apparel Creative Design Pilot Park', 'Provincial Pilot Unit for Optimizing and Upgrading Traditional Industries' kanye neziqu eziningi ezihlonishwayo .
Sinefektri yethu yozakwethu nefektri yokuphrinta, cishe iminyaka eyishumi yokuhlangenwe nakho ukusiza amakhasimende ethu ngezidingo zawo zomkhiqizo wesembatho, enikeza ukufekethiswa okungokwezifiso, uphawu lwedijithali lokuphrinta, ukuphrinta kokudlulisa ukushisa, ukuthambisa okuncane nokuphrinta kwesilika.
Sisebenza ngokukhethekile ezingutsheni ezilukiwe ezifana nesikibha, ihembe lepolo, i-hoody, ithangi phezulu, i-pant ect., Futhi sinikezela ngezesekeli zezingubo ezifana nesigqoko, isikhwama nezindondo, amasokisi ezipho, ukukhushulwa kanye nemicimbi yangaphandle yomcimbi. Ikhwalithi yisiko lethu, futhi yinto ebaluleke kakhulu kithi. Sihlala siphikelela esimisweni esithi "Ikhasimende Kuqala, Ikhwalithi Ebaluleke Kakhulu". Inkampani yethu inethimba le-QC eliqeqeshiwe ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu inekhwalithi engcono kakhulu ngaphambi kokuthumela nokukhiqiza umugqa kungenza ikhwalithi enhle ngesikhathi esifushane. Futhi sineqembu lokuklama lochwepheshe, lingakusiza udwebe isithombe somphumela ngokwengqondo yakho. Udinga nje ukunikezela ngokukhululeka ebuchosheni bakho, silapha ukuzogcwaliseka.
Ngabe ufuna ukugqoka izingubo ezenziwe ngezifiso nomqondo wakho? Ngabe ufuna ukudala isembatho sakho somkhiqizo? Ngabe ufuna ukwehluka futhi ube musha? Uma kunjalo, ungachofoza endaweni engezansi kwesokudla ukuze uyithole! Uyemukelwa kuwebhusayithi yethu.